कसरी प्राप्त गर्नेत फेरी ‘मेमोरी कार्ड’ बाट डिलिट भएका डाटा ? जानी राखौँ ! – Todays Nepal
कसरी प्राप्त गर्नेत फेरी ‘मेमोरी कार्ड’ बाट डिलिट भएका डाटा ? जानी राखौँ !
By Todays Nepal | नेपाल आज	 Last updated Jan 1, 2018
फोनको इन्टरनल मेमोरी कम हुँदा प्रयोगकर्ताले मेमोरी कार्डको प्रयोग गर्दछन । मेमोरी कार्डमा एप्स, म्युजिक, भिडियो, फोटो समेत अन्य डाटा स्टोर गर्ने सकिन्छ ।
यस्तो अवस्थामा तपाईको मेमोरी कार्ड खराब भएमा के गर्नुहुन्छ? यस अवस्थामा तपाईको व्यक्तिगत र आवश्यक डाटा नोक्सान हुन सक्छ । यस्ता समस्याको समाधानको लागि एक सजिलो उपाय अपनाउन सकिन्छ । जसले मेमोरी कार्डबाट डिलिट भएका डाटा पुन: प्राप्त गर्न सकिन्छ ।
किन खेल्छ मनमा यौनका कुरा ?
श्रीपेच उतार्न भनेपछि…
फेसबुकले ल्यायाे नयाँ फिचर, यूट्यूबलाई दिन्छ टक्कर ?
संसारले प्रतिक्षा गरेको ‘एप्पलका आई कार’ कहिले आउँछ ?
दोस्रो दुनियाको खोजीको लागी चीनले बनायो अहिलेसम्मको सबैभन्दा ठुलो टेलिस्कोप